Dowladda Kenya oo loogu baaqay inay mag siiyaan qoysaska Askartii lagu dilay Ceel-cadde. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Dowladda Kenya oo loogu baaqay inay mag siiyaan qoysaska Askartii lagu dilay Ceel-cadde.
Hoggaamiyayaasha Degmadda Tran Mara ee Gobalka North Rift Valley ee dalka Kenya, kuna dhow xuduudka dalka Tanzania ayaa baaqaasi ka jeediyey Guriga uu lahaa Sarkaal la oran jirey Elias Kirionki, kaasi oo ka mid ahaa Askartii Kenyanka ee bishii hore ee Janaayo 15-dii lagu dilay Weerarkii Alshabaab ku qaadeen Ciiddankii Kenyanka ee ku sugnaa Xero ku taalla Deegaanka Ceel-cadde ee Gobalka Gedo.
“Waxaan Dowladda ka codsanaynaa inay sii wadaan bixinta Mushaaraadka Saraakiisha iyo Askarta lagu dilay iyagoo difaacayey dalkooda” ayuu yiri Sarkaalka Adeegga Dadweynaha ugu qaabilsan Milliteriga Kenya, Leboo Morintat.
Waxa uu intaasi ku daray inay Tallaabadaasi ku dhiirigelinayso saaxiibadooda kale inay noqdaan Waddaniyiin u taagaan inay dalkooda ka difaacaan gardarradda gudaha iyo Dibedda.
Josel Tasur oo ah Siyaasi ka hadlay Munaasabadda ka dhacday Degmadda Tan Maran ayaa ugu baaqay Dowladda Kenya inay il gaar ah ku eegaan Qoysaska gablamay, isla markaana aan dib loo dhigin Taageeradda lagu dhisayo Mooraalkooda.
Waxa uu intaasi ku daray inay Tallaabadaasi tahay tan keliya ee ay Dowladda ku daryeeli karto qoysaska Askarta ay Alshabaab dileen, wuxuuna dhinaca kale sheegay inuu Ajendaha Alshabaab yahay inay khalkhal geliyaan Deganaanshaha dalka Kenya iyo dalalka kale.
Hoggaamiyayaasha deegaanka Tran Mara oo u badan kuwa ka soo jeeda Qabiilka Masayga ee Kenya waxay ugu dambeyntii Farriin u direen Ciiddanka Kenya ee ku sugan gudaha dalka Somalia oo ay ugu baaqeen inay Feejignaan dheeri ka qabaan weeraradda ay Alshabaab habeen iyo maalin ku soo weerari karaan.
Kanada oo ka laabatay qorshe Muwadin Somali loogu gacan gelin lahaa Maraykanka.